राजु स्याङतान – मझेरी डट कम
सिड्यो साब !
म मनमाया नेपाली
मेरो नागरिकता बनाइदिनुपर्‍यो
दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो
मुचुल्का, सर्जिमिन र सिफारिस
केही पनि छैन मसँग
छैन मसँग बाबुको नागरिकता पनि
तर म यही धर्तीमा
१९ वर्षअघि जन्मिएको सत्य हो
कैदी नं २१
बार्दलीको डिलमा बसेर
एउटा पन्छी कराइरहेको छ
गोपीकृष्ण कहु पट्टु
गोपीकृष्ण कहु पट्टु ।
“माफ गर्नुहोला सर, स्कुलमा तपाईको गतिबिधिका कारण तपाईलाई स्कुलबाट निकाल्न हामी बाध्य भयौं,” अफिस पस्नै लाग्ने बेला स्कुलका प्रधानाध्यापकले उसलाई ढोका मै रोकी बिदाइ पत्र पो थमाई दियो ।
उ केही नबोली फनक्क फर्केर स्कुलको प्राङगनबाटलुरुलुरु बाहिरिदै थियो ।
गरिबको आफ्नो बिहानी छैन
फेरिन्छ ऋतु कहानी छैन
चढाउँछौं रगत माटोको लागि
खुशीको एकपल जिन्दगानी छैन
को हो रुने मान्छे ?
को हो राति राति चिहान घारीमा रुने ?
को हो राति राति पर्खालभित्र रुने ?
स्पाटाकस्का ननिझेका आँखाहरू हौ भने
संसारका कुना कुनाबाट
बन्धन चुडाल्ने करौंतीहरू लिएर उठ
एक त्यान्द्रो जीवन
नाम्लोले घिसार्दै घिसार्दै हिड्ने
अचानक बेपत्ता भयो
मसँगै पढ्ने साथीहरू मध्ये सम्झना र गम्बे असाध्यै मिलनसार साथीहरू थिए । सम्झना डाँडाटोलको पुजारी ब्राम्मणको छोरी, मभन्दा दुई महिनामात्र दिदी थिई । उसको वुवा पञ्चेकालमा वडा अध्यक्ष थिए रे । जिल्लाको अड्डासम्म राम्रै पहुँच भएका नेता । समय अनुसार रंग बदल्न सिपालु सदावहार नेताको रुपमा गाउँलेहरूले बुझ्थे । गाउँघरमा दुःख, अनिकाल आईपर्दा गुहार्ने तिनै सम्झनाको घर थियो ।
गणतन्त्र तिमी आयौ छाना फेरिएन
उही कलम उही मसी पाना फेरिएन
उस्तैछन् ब्वाँसाहरू उस्तैछन् सिकारी पनि
देश लुछि भोज गर्छन् दाना फेरिएन
बाहिर बाहिर हल्ला खल्ला भित्र भित्र मिलेमतो
ताण्डव नृत्य उहि पुरानो गाना फेरिएन
उपत्यका बाहिरबाट काठमाण्डौंमा केही गर्छु भनेर आउनेहरूको लागि बाह्रमासे डिउटी हो कोठा खोज्नु । गाउघरमा लठेप्रोले जीवनसंगी सजिलै पाउला तर यहाँ कोठा पाउँन मुस्किल छ । बल्ल बल्ल पाए पनि विविध अड्चन झेल्नु पर्छ । करिव तीन हप्ता खोजेपछि बानेश्वर बुद्धनगरमा एउटा मध्ययम स्तरको कोठा पाएँ । घरबेटीले रंगरोघन गरे पनि बसौं लाग्ने भने थिएन । भान्साका टाटाहरू, कार्पेटको टुक्राटुक्री, नपल्टिएको भित्तपात्रो, चुरोटका ठुटाठुटी, फ्याँकिएको कपीहरू । यी नै थिए कोठाको शौन्दर्य ।
मेरो घरमा भुत आउँछ
झुपडीको चिसो चुलो बाल्नेलाई सलाम !
भोकाएको दुव्लो देश पाल्नेलाई सलाम !!
आफ्नी जोईको गुन्यू–चोली सबले फेरेकै छन्
देशको लाज छोप्ने टालो टाल्नेलाई सलाम !
म एमाओवादीको महाअधिवेशनमा भात पकाउन एउटा टेन्टबाट खटिएको थिएँ । मेरो काम भाँडा माझ्ने थियो । भाडा माझ्ने ठाँउबाट माओवादीको भाषण बेला बेलामा कानैमा गुन्जिन आउँथ्यो । दोस्रो दिन एउटा नारी आवाज वरपर गुन्जियो । कतै सुने सुने जस्तो, उक्त आवाज पछ्याउँदै गएँ । जति जति नजिक पुग्यो, त्यति त्यति परिचित लाग्न थाल्यो । भान्सेको परिचय पत्र देखाएर टेन्टको प्वालबाट स्टेजमा चिहाएँ ।
कपाल आधाउदी फुलिसकेको । झट्ट हेर्दा साठ्ठी वटा हिउँद त काटे बुढाले जस्तो लाग्ने । पूर्वको झापाली बुढा । सानैमा आमा बुवा बितेपछि ईन्डियामा ट्रकको खलासी बसेछन् । नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि बाँकी उमेर नेपाल र नेपालीको लागि अर्पण गर्ने भन्दै बुढा होमिए जनयुद्धमा । जनयुद्धमा साहिँला दाइको उपनाम पाए । घरको कुन चाहिँ भाइ हो उनै जानुन् । तर सबैले उनलाई साहिँला दाइ भनेर बोलाउँन थाले । यहाँसम्मकी उनीभन्दा दश बर्ष जेठो उमेरका साथीहरूले पनि उनलाई साहिँला दाइ भनेर बोलाउन थाले । जनमुक्ति सेनाको ब्यवस्थापकिय जिम्मेवारी समाल्थे बुढा ।
“भाइ यो पत्र उसले लेखेको । सधै तिमीलाई देखाउछु भन्थी ।” एक जना अपरिचित दिदीले मेरो हातमा पत्र थमाईदिनु भयो ।
मेरो आँखामा उकुसमुकुस भएर कसैको बालापनको तस्विर नाचिरहेको थियो । वरिपरि नजिकका आफन्त साथीभाइहरू मेरो निमित्त सान्त्वनाका अमुल्य शब्दहरू खर्चिदै थिए । अक्सर मान्छेको जीवनमा घट्ने घटनाभन्दा पृथक घटना थियो त्यो । अपरिचित दिदीले थमाएको पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो ।
“आधा घण्टा अगाडि ढोका ढक ढक गर्या थियो । अब फेरि गर्ने बेला भयो । सायद अब चाहिँ ढोका नै फोर्छ कि ? त्यो जुँगे नै आउन बेर छैन । कहाँ फँसियो यार । मेरो साथीहरू निदाएको बहाना गर्दैछन् । उ-उ- फेरि कोही आए जस्तो छ । हे प्रभु अब चाहिँ पक्कै आयो । भगवान प्लिज मद्दत गर । ए होईन रहेछ । अगाडि के के हुन्छ । थाहा छैन यति चाहिँ लेखिराख्छु । पछिलाई सम्झना हुन्छ ।”
कहिले जलजलाको आगनमा चुँडिएको
जंगलीपातमा साम्यवादको अक्षर खोप्दै
कहिले माछापुछ्रेको काखमा लुकामारी खेल्ने
बादलको रेसाहरूमा गणतन्त्रको रंगिन सपना बुन्दै
एउटा अटल आस्था बोकेर
असमानताको बाँझो गराहरूमा
समानताको बाउसे बनेर हिँड्ने धनश्याम
आज कठै त्यही गराको साँधमा ढल्यो